Inona No Ataontsika & Ahoana No Hanaovantsika Azy : Olana Roa Mampiady Hevitra Ny Filànkevitry Ny Vondrom-Piarahamonina · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Georgia Popplewell, Ellery Roberts Biddle, Eddie Avila, Ivan Sigal Nandika Lauren RAJAOBELINA
Voadika ny 14 Oktobra 2018 6:19 GMT
Sary avy amin'i Jer Clarke. CC-BY-NC.
Hivory ny filànkevitry ny vondrom-piarahamonina GV ! Hatramin'izao 100 no isan'ny mpandray anjara efa voamarina, ary manantena izahay fa hiaraka aminay ny ankamaroanareo alohan'ny daty fetra ny 30 Aogositra.
Araka ny efa fantatry ny maro amin'izao fotoana izao, dia natsangantsika ity filànkevitra ity satria tojo olana lehibe momba ny maha-isika antsika sy ny ho avintsika isika. Mihevitra ny ekipa fototra fa tsy maintsy miara-mihevitra ireo olana ireo isika amin'ny maha-vondrom-piarahamonina antsika.
Mamakafaka lalina kokoa ny roa amin'ireo fanontaniana efatra noho ny tamin'ireo lahatsoratra teo aloha ity lahatsoratra am-bilaogy ity. Toy izao izy ireo :
Tokony ho ferantsika ve ny sehatry ny olana iasantsika ?
2. Tokony hitady mpiara-miasa manana traikefa sy fahalalana manokana ve isika, sa tokony hifantoka amin'ny fanofanana ireo mpiara-miasa tsy ampy traikefa ?
1. Tokony ho ferantsika ve ny sehatry ny olana iasantsika ?
Nifanarahantsika ny fepetra vitsy momba ny karazana hetsika ilofosantsika sy ny tantara soratantsika. Miharihary ao amin'ny famoaham-baovaontsika, izay ahafahan'ireo mpilatsaka an-tsitrapo manoratra momba ny zava-drehetra izany, manomboka amin'ny kolikoly ka hatramin'ny sivana sy ny lazan'ny lakozia. Etsy ankilan'izany, ny lingua-ntsika, ny tetikasa Advox sy ny Rising voices dia samy mifantoka aminà tetikasa manokana – fandikàna teny (Lingua) sy ny fiarovana (Advox) na ny fanomezana làlana ny fahalalahan'ny fanehoankevitra (RV) sy ny fidirana amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny aterineto.
Ahoana no fomba nahatongavantsika eto ?
Tany amboalohany, dia mpanome fanazavana isika. Tany amin'ny fiandohan'ny taona 2000 isika, nanampy ireo mpamaky mba hahafantatra bebe kokoa izay resahana ao amin'ny ankamaroan'ny tontolon'ny bilaogy izay miroborobo manerana izao tontolo izao. Tsy fitateram-baovao no asantsika tamin'izany fotoana izany, fa fanazavàna sy famerenana indray ny hevitr'izay efa voatantara, mba hanandratana sy hanamafisana ireo tantara manan-danja izay tsy hita any amin'ny haino aman-jery mahazatra.
Koa satria niroborobo ny vondrom-piarahamonintsika ary nivoatra ny haino aman-jery amin'ny aterineto, dia nanomboka nampisandrahaka ny asantsika isika. Raha mbola nifikitra tamin'ny fanoratana ny ankamaroan'ireo mpikirakira ao amin'ny GV, ny sasany kosa nanomboka nanangana tetikasa vaovao toy ny Lingua, Advox ary ny Rising Voices. Na dia nanana tanjona mazava aza ireo tetikasa ireo, ny sampana mpanoratra tantara ato amin'ny GV, anarana niantsoantsika ilay famoaham-baovao voalohany tamin'ny 2014 tany ho any, dia mbola nanohy nandrakotra lohahevitra maro be.
Lasa toerana tena tsy milamina ho an'ny daholobe – indraindray aza mampidi-doza – ny aterineto mainka moa fa miampy ny Facebook, ny Twitter ary ireo sehatra haino aman-jery sosialy hafa izay mandrisika ny fifampiresahana amin'ny aterineto. Manjary sarotra kokoa ny mikaroka sy mifantoka amin'ireo resaka manan-danja. Ary mifanindran-dàlana amin'izany ny fisian'ireo haino aman-jery hafa izay mianatra ny hanao karazan'asa toy ny an'ny GV, miaraka amin'ny loharano sy fitaovana maro eo an-tànany.
Aiza ho aiza isika izao ? Ahoana no ahafahantsika mivoatra ?
Niova be ny tanjona sy ny endriky ny tantarantsika hatramin'ny nanombohantsika azy voalohany. Nefa ao amin'ny trano famoaham-baovaontsika, ny fisokafantsika amin'ny (saika) ireo tantaranà lohahevitra rehetra sy ny rafi-pifampitondrantsika – fizarazaràna ho ekipa mpanoratra amin'ny ampaham-potoana- – dia tsy niova firy. Miara-miasa amin'ny mpanoratra amin'ireo lohahevitra maro samihafa ireo tonian-dahatsoratry ny trano famoahambaovao, hany ka vitsy ny fotoana ho azy ireo handaminana sy hifantohana amin'ny fandrakofana.
Araka ny hitantsika tary aloha, mila manontany tena isika hoe : Rehefa misy fampitàna tantara sy fifantohana amina tetikasa, inona no zava-dehibe kokoa amintsika ? Inona no tanjona tena tiantsika ho tratrarina ?
Raha ferantsika ny tanjontsika ….
Tamin'ny fihaonana an-tampony nataontsika tamin'ny 2017 sy ny fakànkevitra manodidina izany, dia nambaran'ireo mpikambana ao amin'ny vondrona ny faniriany mba hisy fiantraikany amin'izao tontolo izao ny GV. Maro no nilaza manokana ny momba ny zon'olombelona, ny olana momba ny tontolo iainana sy ny rariny ara-tsosialy izay tokony hifotorantsika. Mba hanatanterahana izany, dia tokony hifidy sehatra manokana hifotorana isika sady mandrafitra tetikasam-panontàna sy fanentanana manodidina izany.
Tena nahomby teo amin'ity sehatra ity ny tetikasa toy ny Rising voices sy ny Advox, tamin'ny fifandrimbonany tamin'ny mpikambana ato amin'ny vondrom-piarahamonina sy ireo mpiaramiombon'antoka avy any ivelany izay misahana manokana ny olana mifandraika amin'ny fidirana amin'ny teknolojia, fampiroboroboana ny haino aman-jery ary ny zo ara-kajimirindra.
Raha manaraka izany làlana izany ny trano famoahambaovao, dia mety hahafoy zavatra ihany koa isika. Mety afointsika ny ” fomba fiasa tsy ampoizina ” — tsy ampoizina indraindray ny fomba isehoan'ilay tantara — izay efa kolontsaintsika hatrizay. Rehefe vitsy ny sakantsakana, misy mipoitra tampoka ny tetikasa sy ny tantara ary afaka manaraka azy ireny an-kalalahana isika satria tsy milona tanteraka anatin'ireo tetikasa na fanentanana manan-javatra ifantohana.
Mety hafointsika ihany koa ireo mpiara-miasa sasany, toy ireo mpikirakira GV sasany, hasina goavana ny fahalalahana sy ny hakingàna amin'ny fanoratana, saika ny momba ny zava-drehetra mihitsy.
Tahaka izany ihany koa, azontsika atao ny manapakevitra mba hametra ny fototry ny tetikasan'ny asantsika – tetikasa fanontàna manokana, famoronana tambajotra, fiofanana, fanomezana kely, fikarohana sy fampiroboroboana ny teknolojia mifandraika amin'izany. Amin'izao fotoana izao, dia mety midadasika tahaka ny tanjontsika amin'ny famoahandahatsoratra ireo tetikasa ireo. Azontsika atao ihany koa ve ny mametra azy ireo ho amina lohahevitra, amin'ny jeografia na amin-javatra hafa ?
Ary raha tazonintsika na hitarintsika ny tanjontsika …
Ankoatra izany, azontsika tazonina ve ny ambaindainy sa hitarina kokoa ny tanjon'ny asantsika ho amin'ny famelàna ireo mpanoratra sy tonian-dahatsoratra hanana fizakàntena bebe kokoa sy fahefàna hifidy izay ho soratana sy ny fomba hanoràtana izany? Amin'ity modely ity, dia hanjary ho vovonana iray isika, miaraka amin'ireo olona izay manorina ny fisiana mifototra amin'ny tombotsoany. Ny sehatra tahaka izany, toy ny The Conversation, izay miara-miasa amin'ny mpianatry ny oniversite sy ny mpiara-miombon'antoka amin'ny oniversite, dia manohana ireo vondrom-piarahamonina lehibe kokoa. Mety ho lasa sehatra malalaka hanaovana fikarohana sy sivana tsara kokoa ny Global Voices, amin'ny famporisihana olona sy mpiara-miombon'antoka voafantina maro mba hamoaka lahatsoratra, amin'ny fanitarana ny vondrom-piarahamonina ary amin'ny fampitomboana ho avo roa heny ny fananantsika vintana.
Amin'izao fotoana izao, dia mandray mpiara-miasa maro isan-karazany ny Global Voices, avy amin'ireo mpanao gazety zà-draharaha sy ireo mpiaro, ka hatraminì'ireo olona izay vaovao amin'ny asa fanoratana sy ny fikatrohana. Manasa olona marobe izay afaka mitondra tantara goavana na fomba fijery mahaliana ho an'ny GV isika .
Matetika dia mila fanofànana sy fanohanana avy amin'ny ankamaroan'ireo mpitarika ireo mpiara-miasa tsy ampy traikefa izay mila fotoana betsaka sy fahafoizantena ary mamela fotoana kely handaminana ireo asa sy fandrakofana manokana. Ny fanadihadiana sy ny tamberina avy amin'nireo mpanoratra ao amin'ny trano famoahambaovao no nanazava fa asa sarotra ny fanofànana sady mila fanohanana bebe kokoa.
Raha te-hijanona ho tsy manavakavaka isika, dia tsy maintsy mandinika izay hampivoarana ny drafitrasa fampiofanana sy ny fampianarana, amin'izay mety hahazoan'ireo mpiara-miasa tsy ampy traikefa ato amin'ny Global Voices traikefa amin'ny fanoratana, fisoloana vava ary amin'ny fikarohana traikefa alohan'ny hahatongavany ho mpiara-miasa tanteraka. Miaraka amin'ireo mpitantana vaovao mitarika fandaharanasa tahaka izany, dia mety ho ity no ivon'ny asan'ny GV.
Na izany aza, azontsika ampitomboina ny fepetra takiana mba hahatongavana ho mpiara-miasa amin'ny GV, fomba iray izay hahafahan'ireo mpiasa sy mpilatsaka an-tsitrapo manana traikefa manokana fotoana misimisy kokoa hifantohana amin'ny asa misy fiantraikany goavana. Raha ataontsika izany, dia mety hafointsika ny sasany amin'ireo mpiara-miasa, fa mety hahazo olom-baovao izay mahaliana kokoa amin'ny fitondràny ny talentany manokana , toy ny fikarohana, fijerena ny angona, sy ny tetikasa amina vondrona haino aman-jery maromaro.
Ahoana no ifandraisan'ireo fanontaniana anankiroa ireo ?
Ohatra ny hoe tsy afa-misaraka ireo fanontaniana roa ireo. Raha ferantsika ny tanjontsika, dia tsy maintsy mitady mpiara-miasa manantalenta kokoa ihany koa isika. Fa tsy izay fotsiny angamba no safidy.
Raha ferantsika ny tanjontsika, dia tokony mbola hisokatra amin'ny ambaratongan-traikefa rehetra isika. Metyo ho ilaintsika ny mahazo antoka fa mahafoy tena ho amin'ny tanjona izay nofidiantsika hifantohana ireo mpiara-miasa ireo ary afaka manaraka fiofanana amin'zany sehatra izany. Nety tsara ny sasany amin'ireo tetikasantsika Advox sy RV. Mpikatroka mafana fo zà-draharaha no nikarakara ny fanentanantsika ao amin'ny haino aman-jery sosialy, fa mpikirakira GV am-polony, tsy miankina amin'ny traikefa ananany, no nandray anjara sy nanampy mba hampisy ny fiantraikany.
Raha mbola tohizantsika ny momba ireo fitantarana ireo lohahevitra maro samy hafa, dia tokony hikaroka mpiara-miasa manana talenta sy fahalalàna manokana isika, fa avy amin'ny sehatra maro samy hafa. Mety mahatonga ny fijery antsika ho tahaka ny haino aman-jery mpanome vaovao “mahazatra” izay tsy dia zavatra ratsy loatra izany. Tokony hitady fomba hafa mba hiarovana ny maha-izy ny vondrom-piarahamonintsika isika rehefa manasa ireo mpiara-miasa zà-draharaha manana traikefa ambony izay ananantsika fitokisana.
Manintona anao ve ireo fanontaniana ireo ? Te-hanokana fotoana sy hery ho an'ny hoavin'ny GV ve ianao ? Raha mbola tsy nanao izany ianao, fenoy ny fangatahanao hiditra amin'ny Filànkevitry ny Vondrom-piarahamonina alohan'ny 30 Aogositra ! Ary andraso ny lahatsoratra manaraka.